ကဗျာကိုသတ်ရန် - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၉၆၀ ဇူလိုင် ၁၁
ကဗျာကိုသတ်ရန် သည်အမေရိကန်စာရေးဆရာ Harper Lee ၏ဝတ္ထုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၁၉၆၀ တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးချက်ချင်းပင်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အထက်တန်းနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ Kill to Kock to Mockingbird သည်ပို လီစ်ရီ ဇာရူ့ဆုကို ရရှိပြီးခေတ်မီသော အမေရိကန်စာပေ ၏ဂန္ထဝင်ဖြစ်လာသည်။ ဇာတ်လမ်းနှင့်ဇာတ်ကောင်များသည် Lee ၏သူမ၏မိသားစု၊ အိမ်နီးချင်းများနှင့်သူမအသက် ၁၀ နှစ်အရွယ် ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင်သူမ၏ဇာတိမြို့ Monroeville, Alabama တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအပေါ်လီ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်အပေါ် အခြေခံ၍ အားနည်း သည်။
အဓမ္မပြုကျင့်မှု နှင့် လူမျိုးရေးမညီမျှမှု ဆိုင်ရာပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသော်လည်း ဝတ္ထုသည်၎င်း၏နွေးထွေးမှုနှင့်ဟာသဉာဏ်ကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ ဇာတ်ကြောင်းပြောသူ၏ဖခင် Atticus Finch သည်စာဖတ်သူများစွာအတွက်ကိုယ်ကျင့်တရားသူရဲကောင်းတစ်ဦး အဖြစ်နှင့်ရှေ့နေများအတွက်သမာဓိစံနမူနာအဖြစ်ပြသခဲ့သည်။ သမိုင်းပညာရှင် ဂျိုးဇက် ကရက်စ ပင်းနို က“ နှစ်ဆယ်ရာစုတွင် လူတစ် ဦး ကိုသတ်ဖြတ်ခြင်း သည်အမေရိကရှိလူမျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်သောအကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖတ်ရဆုံးစာအုပ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သောအက်တီကပ်စ် Finch၊ အမြဲတမ်းလူမျိုးရေးသူရဲကောင်းပုံရိပ်ဖြစ်သည်” ဟုရှင်းပြသည်။ တောင်ပိုင်း Gothic နှင့် Bildungsroman ဝတ္ထု အနေ နှင့် ကဗျာကိုသတ်ရန် ၏အဓိကအကြောင်းအရာများ။ လူမျိုးရေးမမျှတမှုနှင့်အပြစ်ကင်းစင်ခြင်း၏ဖျက်ဆီးခြင်းပါဝငျသညျ။ ပညာရှင်များ Lee ကလည်းလူတန်းစား, ရဲစွမ်းသတ္တိ, သနားခြင်းကရုဏာစိတ်နှင့်, ကျားမအခန်းကဏ္ဍ၏ကိစ္စရပ်များကိုအမှာစကားပြောကြားကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြ သည်နက်ရှိုင်းသောတောင် ။ ဤစာအုပ်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျောင်းများတွင်သည်းခံနိုင်မှုနှင့်မလိုမုန်းထားမှုကိုလျော့ကျစေသည့်သင်ခန်းစာများဖြင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သင်ကြားထားသည်။ ယင်း၏ themes များရှိနေသော်လည်း ရန်သတ်နေတဲ့ Mockingbird မကြာခဏအများပြည်သူစာသင်ခန်းကနေဖယ်ရှားဘို့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမှဘာသာရပ် ဖြစ်ခဲ့သည် စိန်ခေါ် လူမျိုးရေး၎င်း၏အသုံးပြုရန် epithets ။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ဗြိတိသျှစာကြည့်တိုက်မှူးများသည်စာအုပ်ကို “ လူကြီးတိုင်းမသေမီဖတ်သင့်သည်” ဟု ကျမ်းစာ ရှေ့တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဝတ္ထုကို တုံ့ပြန်မှုသည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုအပေါ်တွင်များစွာကွဲပြားသည်။ ရောင်းချသည့်မိတ္တူအရေအတွက်နှင့်ပညာရေးတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုမှုရှိသော်လည်း၎င်းကိုစာပေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနည်းပါးသည်။ စာရေးဆရာများနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များမှ ကဗျာကိုသတ်ရန် ကို တစ် ဦး ချင်းအထင်အရှားစုဆောင်းခဲ့သည့်စာရေးဆရာ Mary McDonough Murphy ကထိုစာအုပ်ကို“ အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ရပ်” ဟုခေါ်ဆိုသည်။ ၎င်းကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် အကယ်ဒမီဆုရရုပ်ရှင်ကား သို့ ဒါရိုက်တာ Robert Mulligan ကထည့်သွင်းခဲ့ပြီး Horton Foote ၏ဇာတ်ညွှန်းဖြင့်ပြခဲ့သည် ။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှစ၍ ဝတ္ထုကိုအခြေခံသည့်ပြဇာတ်ကို Harper Lee ၏ဇာတိမြို့တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သတ်ပစ်တဲ့ Mockingbird သည်အထိ Lee ၏သာထုတ်ဝေစာအုပ်ဖြစ်ခဲ့သည် Go ကိုသတ်မှတ်ရန်တစ်ဦးကငျးစောငျ့ တစ်ခုအစောပိုင်းက မူကြမ်း ၏ ရန်သတ်နေတဲ့ Mockingbird , ဇူလိုင်လ 14 ရက်နေ့တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်သူမကခဲ့ပေမယ့် 2015 ခုနှစ် Lee ကဖေဖော်ဝါရီလ 2016 ခုနှစ်သူမသေဆုံးခင်အထိသူမ၏အလုပ်ရဲ့သက်ရောက်မှုမှတုံ့ပြန်ဆက်လက် ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှစတင်၍ သူကိုယ်တိုင်နှင့်ဝတ္ထုအတွက်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလူသိရှင်ကြားကိုမဆိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်
↑ "The Strange Career of Atticus Finch" (2000). Southern Cultures6(2): 9–30. doi:10.1353/scu.2000.0030.
↑ "Mockingbird 'dropped from GCSE exam'" (in en-GB)၊ BBC News၊ 2014-05-25။ "Steinbeck's six-chapter novella written in 1937 about displaced ranch workers during the Great Depression"
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကဗျာကိုသတ်ရန်&oldid=705900" မှ ရယူရန်